Frank Lampard Oo Helay Shaqadii Ugu Horreysay Tan Iyo Markii Laga Caydhiyey Chelsea - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaFrank Lampard Oo Helay Shaqadii Ugu Horreysay Tan Iyo Markii Laga Caydhiyey Chelsea
Frank Lampard Oo Helay Shaqadii Ugu Horreysay Tan Iyo Markii Laga Caydhiyey Chelsea
June 10, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Tababarihii hore ee Chelsea ee Frank Lampard ayaa helay shaqadii ugu horreysay tan iyo markii laga caydhiyey kooxdiisii hore ee Chelsea bishii January ee sannadkan.
Halyeyga Chelsea ayaanu magaciisu ka bixin warbaahinta usbuucyadii ugu dambeeyey, waxaana lala xidhiidhinayay dhawr kooxood oo horyaalka Premier League ka dhisan inuu midkood tababare u noqon doono, laakiin midkoodna wax war ah oo kasoo kordhay ma jiro.
Maalinta Axadda ee toddobaadkan foodda inagu soo haya, Frank Lampard ayay taageereyaashu arki doonaan isagoo shaqadii ugu horreysay qabanaya tan iyo markii laga caydhiyey Chelsea, mana aha mid tababarenimo la xidhiidha.
Istuudiyaha telefishanka BBC Sports ayaa uu Frank Lampard kasoo muuqan doonaa iyadoo ay ag-fadhiyaan halyeeyadii hore ee kubadda cagta sida Darren Fletcher, Jimmy Floyd Hasselbeink, Gary Lineker, Alan Shearar iyo Rido Ferdinand, waxaanay wada-gorfayn doonaan ciyaarta England iyo Croatia ay ku furanayaan tartanka qaramada Yurub.
Muddo bil ah oo uu soconayo tartanka Euro ayaa uu Lampard noqon doonaa shaqaale ka tirsan BBC oo falanqeeya ciyaaraha, isagoo iman doona istuudiyaha.
Lampard ayaa hore uga soo shaqeeyey telefishanka BT Sports waqtigii uu ahaa tababaraha Derby County, waxaana uu falanqeeye ka ahaa kulamada horyaalka Premier League.
42 jirkan ayaan wax shaqo ah qabanin tan iyo bishii January markii laga caydhiyey Chelsea oo uu 18 bilood tababare u ahaa kaddib markii ay kooxdu u degtay kaalinta sagaalaad ee horyaalka Premier League.
Thomas Tuchel oo lagu beddelay ayaa Chelsea keenay kaalinta afraad, una qaaday Champions League, halka ay iska soo xaadiriyeen finalka FA Cup oo Leicester City ay kaga guuleysatay.